I-Anatomy Ye-Going Viral | Martech Zone
ULwesibili, April 3, 2012 NgoMsombuluko, Ephreli 2, 2012 Douglas Karr
Njengoba sengibone amasu amaningi egciwane efa kunokuphila, anginasiqiniseko sokuthi ngikholelwa kakhulu ukuthi kukhona uhlobo lwe-algorithm yokuwina igciwane. Kuyiqiniso ukuthi amanye ama-ejensi angcono kakhulu kunezinye… kodwa angikholwa ukuthi noma ngubani angathembisa isu le-virus… ngaphandle uma bebeka imali ethile ye-BIG nemiklomelo yokuyixhasa. Lokho kusho ukuthi kunezici ezithile ezijwayelekile kumasu egciwane.
Okuqukethwe yigciwane ekugcineni kudinga ukuvusa uhlobo oluthile lokuphendula okungokomzwelo kusuka kuzithameli ezihlosiwe ezibashukumisela ukuthi babelane ngalo ngamanethiwekhi abo omphakathi. Nakhu ukuthi okuqukethwe kwakho kungahamba kusuka ekubukweni okukodwa kuye ezigidini!
nge I-SingleGrain - I-Anatomy Ye-Going Viral.
Tags: viralukumaketha kwamagciwaneamasu egciwaneisu le-virusividiyo yegciwane
Iningi lemboni ye-SEO libuyela emuva